Hiran State - News: HS-Ciidamo ka tirsanaa Ahalusuna oo reer Hiiran ahaa oo ka soo baxay Galgaduud.
HS-Ciidamo ka tirsanaa Ahalusuna oo reer Hiiran ahaa oo ka soo baxay Galgaduud.
HS:-Ciidamo ka tirsanaa Ahalusuna oo soo gaaray gudaha Hiiraan kadib markii ay sheegeen in aysan xiligan u arkin iney Galgaduud sii joogaan kana mid noqdaan ciidamada Ahalusuna ee gobolada dhexe iyagoo sida lagu soo waramayo dhalinyaradaan iyo hogamiyahii ay ka amar qadaneyeen uu qilaaf soo kala dhex galay.
Ciidamadan oo aan si rasmi ah tiradooda loo hubin ayaa lasheegayaa iney sababta ugu weyn ee ay uga soo tageen Galgaduud tahay ineysan halkaasi ka jirin siyaasad rasmi ah oo ay kooxdu ushaqeyso qaab qabiil iyagoo sheegay iney ku biiri doonaan ciidamada kale ee reer Hiiraan ee ku sugan Hiiraan.
Dhalinyaran oo intooda badan laga keenay dhawr bilood ka hor dhulka fog ee miyiga ah amaba soonaha degmada Maxaas oo ay difaac kaka jiri jireen ayaa u muuqda kuwo aan ku qanacsaneyn joogitaankii ay joogeen Galgaduud iyagoo hada intooda badan soo gaaray Hiiraan.
Laakisne warar kale waxey sheegayaan in dhalinyaradan ka bixi taanka ay ka baxeen Ahalusuna ay sabab u yahiin xiriiro kala duwan oo looga sameyey meelo kala duwan oo dalka ka mid ah madama hada socdo qorshe dhalinyarada reer Hiiraan dagaladan joogtada ah looga saarayo kuwii aan dooneyna iney ka baxaane lagu dhiiragelinayo iney dhulkooda ka dagalamaan intii ay kooxda Shabaab ka difaaci lahayeen deegano kale oo dadkii u dhashay noolyahiin amaba joogaan.
Arintaan ayaa waxey dhabar jab ku tahay ninka wakiilka uga ah Hiiraan kooxda Ahalusuna Aden Cawaale hadii ay mar kale ciidamo reer Hiiraan ah ka soo tagaan ururkaasi.
Dhinaca kale warar kale ayaa sheegaya in jidka dheer iyo dhawr jid oo ay ciidamada reer Hiiraan horey u galiyeen Miino oo laga xiray Shabaab loo furayo amaba loo baneynayo hadii uu soo gaaro dhaqdhaqaaqa Ahalusuna gudaha Hiiraan maadama aan Hiiraan looga arag kooxda Ahalusuna koox diin shaqo kuleh, loona arko koox dooneysa inta ay Shabaab dooneyso oo ah xukun.
Qorshaha kale ee qatarteeda leh waa hadii ciidamada Ethiopia ay isku dayaan iney Hiiraan geeyaan kooxdan ay ku aruurinayaan gobolka Galgaduud in ciidamada lagu amri doono iney hubkooda la galaan meelkasta oo dagaal ka bilaabi karaan iyadoo inta badan la isticmali doono jidkooda oo si toos ah loo kala jari doono isku socodka dalka.
Hadiise dalka Somaliya waxa ka jira dano siyaasadeed ku dhisan qabiil qabiil inta dowlad rasmi ah laga helayo ay wadamada deriska ah arimaha Hiiraan kala hadlaan reer Hiiraan dagaalka lagula jiro Shabaab sidiisa ayuu u socon doonaa, hadiise wadamada qarkood ay doonayaan iney dalka sii galiyaan fowdo iyo jahwareer dhib aan iyaga soo gaareyn reer Hiiraan sooma gaareyso waayo dhib iyo colaad midii ay horey bulsahdu u soo mareen ka badan ma soo mari doono ayuu yiri Xaaji Husen oo reer Hiiraan ah.
Shaki kuma jiro hadii mudo gaaban dagaalada Hiiraan kaka furan Shabaab laga dabciyo amaba loo furo oo kaliya dhawr jid oo ka xiran oo Miino la galiyey aad ayey ugu adkaaneysaa in Shabaab Jubooyinka laga saaro awood kasta oo la isticmaalo marka waa lama huran in shacabkasta deegaankiisa lagu qiimeeyo oo aan kooxo magacyo diimeed wata sida Ahalusuna leysku mashquulin in shacab kale deegaankooda inta looqabto xakuma la dhaho waa in siyaasada Somaliya lagala xariiraa degaankasta dadka u dhashay ayeyna warbixintooda kusoo kaabiyeen shacab aanu siyaabo kala duwan ula xiriirnay dhawrkii malmood ee ina dhaaftay.
Kooxda Shabaab oo dhawr jeer oo hore ciidmada reer Hiirana ka codsaden iney u furaan ookaliya labo wado ooka xiran oosida ay sheegeen hadiimid ka mid ahloo furo ay si sahlan ku gaari karaan gobolada Puntland ayaa dagaalo isdaba joog ah kala kulmayey ciidmada xoreynta reer Hiiraan kuwaasi oo codsi kasta oo uga yimada Shabaab ku gacan seyray ilaa ay raali gelin ka bixiyaan waxgaradkii iyo shacabkii ay intey ku xasuuqeen magaalada Belet weyne hadane Gaaleeyeen taasi oo kooxda ku noqotay waran soo tagan jawaabna u waayaan.
Laakinse arinta Shabaab meel sahlan ayaa leyska dhigayaa marka ay noqoto Ahalusuna. Ahalusuna waa koox Hiiraan laga yaqaano qaabkii lagu dhisay iyo ujeedada loo dhisay intaba.
La soco wararkeena danbe iyo arimaha Hiiraan.
· admin on November 26 2011 11:44:36 · 0 Comments · 1759 Reads ·
14,586,048 unique visits